खानी तथा नदीजन्य दोहनको कारणले वातावरणमा पर्न सक्ने असरको अध्ययन अनुसन्धान नगरी व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? अनि ती स्रोतसाधनको मात्रा कति ? नेपालको धरातलीय स्वरुप अनुसार वातावरण मैत्री पक्कै छैन । किनभने चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी ।
दिनभर लाइनमा बसेर कर तिरेर आएँ । अनलाइनबाट सबै खालका कर तिर्ने एप बनाए पो हामीलाई काम लाग्थ्यो । आफ्ना डकुमेन्ट हेर्नको लागि मात्रै नागरिक एप बनाएर कुन चाहिँ युगमा फड्को मारेको हो ? हाम्रा डकुमेन्ट त हामीले स्क्यान गरेरै मोबाइलमा राख्न सकिहाल्छौँ नि !